“အားမာန်” (ဓာတ်ပုံပြပွဲ -၃) 2012 July | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » “အားမာန်” (ဓာတ်ပုံပြပွဲ -၃) 2012 July
“အားမာန်” (ဓာတ်ပုံပြပွဲ -၃) 2012 July
Posted by ေမွာ္ဆရာ on Jul 19, 2012 in Myanmar Gazette, Photography | 32 comments
ဓါတ်ပုံပြပွဲ က အခုမှ ပိတ်လို့ အခုမှ ခေါင်းစဉ် တင်ပေးရပါတယ် …။ ဇူလိုင်လအတွက် ခေါင်းစဉ်ကို ကျွန်တော် အားမာန်လို့ ပေးထားပါတယ် .. ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်များ နဲနဲကြိုးစားကြည့်ဖို့ပါ .။
အားမာန်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်က နဲနဲ ကျယ်ပြန့်လောက်ပါတယ် …။ လသားကလေးလေး လမ်းလျှောက်ကျင့်နေတာလဲ အားမာန်ပါပဲ ..။ ကျောင်းသားတစ်ယောက် စာကို စိတ်ပါလက်ပါကျက်နေတာလဲ အားမာန်ပါပဲ..။ ဆိုက်ကားသမား ဝန်အများကြီးနဲ့ ဆိုက်ကားကို နင်းသွားတာလဲ အားမာန်ပါပဲ..။ ပင်စင်စားအဖိုးကြီး တုတ်ကောက်နဲ့ လမ်းလျှောက်နေတာကလဲ အားမာန်ပါပဲ …။ခေါင်းရွက်ဗျက်ထိုးဈေးသည်တစ်ယောက် လမ်းပေါ်ကနေ ပဲပြုတ်လို့အော်သွားရင်လဲ အားမာန်ပါပဲ ..။ အားမာန်တွေ အများကြီးရှိ နှိုင်ပါတယ်…။
ဘဝအတွက် အားမာန် ၊ အသက်ရှင်နေထိုင်မှုအတွက် အားမာန် ၊ မိသားစုအတွက် အားမာန် ၊ အမျိုးအတွက်အားမာန် ၊ နိုင်ငံ့အတွက်အားမာန် စသည်ဖြင့် အားမာန်ကို ဖော်ကြူးစရာ ရိုက်ကွက် အမြောက်အများရှိနှိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်..။
ပုံလက်ခံတာကတော့ အခုအချိန်ထဲကကို လက်ခံနေပါပြီ။ ဘယ်အချိန်ပိတ်မယ်ဆိုတာကတော့ မောင်ဂီတို့ အသိပေးပါဗျို့ …။
ခေါင်းစဉ် ………………. အားမာန်
အမျိုးအစား …………….. ဆေးရောင်စုံ
အငယ်ဆုံးအရွယ်အစား ……….800 x 600 px
ဖိုင် အမျိုးအစား ……………JPEG
(သီးခြား)ဖော်ပြရန်………….fnumber, shutter speed, ISO
ကန့်သတ်ချက် ……………ရေစာ ၊ ဘောင် ၊ လက်မှတ် ထည့်သွင်းခြင်း မပြုရ
ဓာတ်ပုံလက်ခံ ပိတ်ချိန် ………… မောင်ဂီတို့မှ ထုတ်ပြန်ပေးပါလိမ့်မည် ..။
ပေးပို့ရမည့်လိပ်စာ …………… mgazettephotoshow@gmail.com
ခေါင်းစဉ်နောက်ကျသွားတယ်ဆိုရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပါ..။မှော်ဆရာ ခုတလော တိုင်ပတ်နေလို့ပါ.။ လူကြိုက်အများဆုံးသုံးဦးအတွက် ကျွန်တော် လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် …။
ကဲ ကျွန်တော်တော့ ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်ပါပြီ ..
ကျန်တာကတော့ ဝါသနာရှင်တွေရဲ့ အပိုင်းဖြစ်သွားပါပြီဗျာ…
ပိတ်ရက် ကို ဖြစ်နိုင်ရင် ဆန်းဒေးပဲ ပိတ်ချင်တယ်ဗျာ …
ပထမလက ၂ရရက်နေ့ ဆန်းဒေး ကို လုပ်လိုက်တာ
ဒုတိယလမှာ ခရထက ၂ရရက်နေ့ ဆိုတာကိုအတည်ယူပီး ဗုဒ္ဓဟူးကျတဲ့
နေ့ ပိတ်လိုက်တာ ..အဲ့သည့်နေ့က အတော်လေး ကသီတယ်ဗျို့ ..
၂၈-၂၉-၃ဝ ခရီးသွားမှာမို့…၈လပိုင်း ၅ရက်နေ့မှ ပိတ်ရင် ကောင်းမလား
နောက်ကျလေ ကောင်းလေပေါ့ဗျာ ဒါဆို 5.8.2012 အတည် ဖြစ်ပြီလား ..
ကောင်းပါပြီဗျာ .အတည် ဆိုပါစို့ ..
အဲ့သည့်နေ့ တင်ပေးပါ့မယ်ဗျို့ …
(ဖိုင်ဆိုက်ဇ် ချုံ့တဲ့ ပိုစ့် လည်း သပ်သပ်ရေးပါဦးမယ်ဗျာ..)
အဲ့ …စကားမစပ် နောက်တခု ..
ကျနော်တို့ ဒါကိုကြိုးစားနေကြရတဲ့ ရည်ရွယ်ရင်းက …
ပိုကောင်းအောင် ရိုက်နိုင်ဖို့ .. ဆိုလေတော့…
အခုလ ပုံစံအတိုင်း …လူကြိုက်အများဆုံး -၃ ပုံကလွဲရင်
ကျန် ပြပွဲဝင်တွေကို ဘယ်သူဘယ်ပုံဆိုတာ မဖော်ဘဲ
သည်အတိုင်း ထားထားရင် ကောင်းမလားတွေးမိပါတယ်..
(တကယ်က ခရထ-၂ နောက်ကျနေတာ .. အတော်ပဲလို ဖြစ်သွားရဲ့ )
တခြားတော့ မဟုတ်ဘူးဗျာ .. ဝေဖန်ကြစေချင်တာ ..သုံးသပ်ကြစေချင်တာပါ..
လှလိုက်တာနော် ..အားပေးသွားပါတယ် … အဲ့သည့်လောက်နဲ့ ..ပြီးပြီး နေရင်လည်း
မဟုတ်သေးသလို ..အခြား အစွန်းတဖက်ဖြစ်တဲ့ … လူချင်းသိလို့ ..အားနာတာတို့
မဝေဖန်ချင်တာတို့ ..လည်း မရှိရလေအောင်ပါ …။
(အဝေဖန်မခံချင်လို့ .. မပို့ဘူး ဆိုတာလည်း မရှိစေချင်ပါဘူးဗျာ …)
ဝေဖန်ရေး ရှိမှ တိုးတက်မှာပါ … …
အားပါးတရ …သော critics တွေ ဝဲလ်ကမ်း ပါကြောင်း …
မောင်ဂီပြောတဲ့အတိုင်းပဲ ပ ဒု တ ကိုပဲ နာမည်ဖော်ပြီး ကျန်တာတွေ နာမည်မဖော်တာကို ပြပွဲစည်းကမ်းအနေနဲ့ ရွေးပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…။
တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ အားနာနေတာနဲ့ တိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့သလို ဖြစ်စေပါတယ်။
ကိုယ့်သဘောနဲ့ ပြောရရင်တော့ အားမနာတမ်း ဝေဖန်ပေးခြင်းဟာ တွန်းအားတစ်ခုဖြစ်တာမို့ အားမနာတမ်းဝေဖန်ပေးတာကို ကြိုဆိုပါတယ် ဆြာတို့…….
ကျွန်တော် တင်ပေးရမယ် ဆိုရင်တော့ ည ပိုင်း ပဲ ဖြစ်မယ်ဗျို့.. အင်ဇာဂီ တင်မယ် ဆိုရင်တော့ Sunday ညနေ လောက် ဆို အဆင်ပြေ မယ်ဗျ ..
ပိတ်နဲ့ဦးလေ… ဒီမှာ မိုးတွေတအားရွာနေလို့ ရိုက်တောင် မရိုက်ရသေးဘူး။ ဇွတ်
ဟို ပန်း ၁ ၂ ၃ ထဲက အမျိုးသားရဲ့ လှုပ်ချက်မျိုးကိုရော
အားမာန်လို့ သုံးလို့ရပါသလား ခဗျ
ရမယ်တော့ ထင်တာပဲ.. ရမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဂလို ခုချက်ချင်း ရိုက်လိုက်မဗျို့
အင်း … ဒါလဲ အားမာန်ပါပဲလေ. ..
ဂလိုဆို ရဒယ်ပေါ့ ရိုက်ပစ်လိုက်မှာနော်
ဘီအီးမူးပြီး ယိုင်တိုင်ယိုင်တိုင်နဲ့အိမ်ကို မနဲပြန်လာတာလဲ အားမာန်ပဲဗျ
ဒီစည်းကမ်း ချက် လေး ၁၁ ချက် ကို ဘယ်လို နေမလဲ လို့ ဝိုင်း ဆွေးနွေးကြပါဦး။
member တစ်ဦးသည် အများဆုံး ၁ ပုံ သာ တင်သွင်းနိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံ အရွယ်အစား4x6နှင့် size 1.5 MB အများဆုံး ဖြစ်ရမည်။
ပြပွဲ ရက် ၏ ၁ နှစ်အတွင်း ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးထားသော ပုံများဖြစ်ရမည်။ Digital နည်းဖြင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၊ ထုတ်ပယ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။ color,light and shadow လုပ်နိုင်သည်။
သတ်မှတ်ချိန်ထက် ကျော်လွန်ပြီးမှ ရောက်ရှိလာပါက လက်ခံ မည် မဟုတ်ပါ။
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိဖူး သောပုံများ မဖြစ်ရပါ။
ပြပွဲ ဝင် ပုံနှင့် ပတ်သက်သော အရှုပ်အရှင်း အကြောင်းတစုံတရာပေါ်ပေါက်ပါက ပြပွဲဝင်သူ၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
အမှတ်ပေး poll စနစ် ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာ သည် အတည် ဖြစ်သည်ဟု လက်ခံရပါမည်။
ရောင်စုံ ဓာတ်ပုံ ဖြစ်ရပါမည်။
အချိန်၊ နေရာ နဲ့ Idea များ ဖော်ပြ ခြင်း လက်ခံပါသည်။
ရေစာ နှင့် ဘောင် ကွတ်ခြင်းများ အပြင် စာသားများ မပါရပါ။
အမှတ်ပေး စနစ် (စမ်းသပ်) ကို ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ပါက လက်ခံ ရပါမည်။
တိန် .. list index နဲ့ ရေးတာ .. ဘယ်လိုဖြစ်တာတုန်း ..
နံပါတ် စဉ် နဲ့ ပြန်ကြည့်လိုက်ရအောင် .. ထပ်မန့် လိုက်ပြီ..။
၁ ၊ member တစ်ဦးသည် အများဆုံး ၁ ပုံ သာ တင်သွင်းနိုင်သည်။
၂ ၊ ဓာတ်ပုံ အရွယ်အစား4x6နှင့် size 1.5 MB အများဆုံး ဖြစ်ရမည်။
၃ ၊ ပြပွဲ ရက် ၏ ၁ နှစ်အတွင်း ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးထားသော ပုံများဖြစ်ရမည်။ Digital နည်းဖြင့် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၊ ထုတ်ပယ်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရ။ color,light and shadow လုပ်နိုင်သည်။
၄ ၊ သတ်မှတ်ချိန်ထက် ကျော်လွန်ပြီးမှ ရောက်ရှိလာပါက လက်ခံ မည် မဟုတ်ပါ။
၅ ၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ပြိုင်ပွဲများတွင် ဆုရရှိဖူး သောပုံများ မဖြစ်ရပါ။
၆ ၊ ပြပွဲ ဝင် ပုံနှင့် ပတ်သက်သော အရှုပ်အရှင်း အကြောင်းတစုံတရာပေါ်ပေါက်ပါက ပြပွဲဝင်သူ၏ တာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
ရ ၊ အမှတ်ပေး poll စနစ် ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာ သည် အတည် ဖြစ်သည်ဟု လက်ခံရပါမည်။
၈ ၊ ရောင်စုံ ဓာတ်ပုံ ဖြစ်ရပါမည်။
၉ ၊ အချိန်၊ နေရာ နဲ့ Idea များ ဖော်ပြ ခြင်း လက်ခံပါသည်။
၁၀၊ ရေစာ နှင့် ဘောင် ကွတ်ခြင်းများ အပြင် စာသားများ မပါရပါ။
၁၁၊ အမှတ်ပေး စနစ် (စမ်းသပ်) ကို ဖြည့်စွက် ပြင်ဆင်ပါက လက်ခံ ရပါမည်။
1.5 mb က.မနည်းလွန်းဘူးလား.. 15 mb ကိုများ..ပြောတာလား..
“ဘဝ” လို့ သိထားမိပြီး ကလေးတစ်ယောက် ကို တောင် ခေါင်းစဉ် အာချောင် မိလိုက်သေးရဲ့။
အဲဒီသူ တစ်ယောက် အမှန် ခေါင်းစဉ် ကို အချိန်မှီ သိနိုင်မယ် လို့ ထင်ရတာပါဘဲ။
ဟော … ပေါ်လာပြီ။ သူဘဲ။
ကျနော့်လက်ရာများ တင်ရာမှ ပေမမှီပါ။
နောက်လမှာ ဘဝဆက်လာပါမယ် ဦးပေါက်ရဲ့ …
ဒါဆိုကိုပေါက် ဘဝ တော့ရေဆုန်မျောပြီပေါ့
လုပ်လိုက်မှ ကိုပေါက် ဘဝပျက်တော့မယ်ထင်ပါရဲ့။
စိတ်ဝင်စားလိုက်တာ ဝင်ပြီး ပါဝင်ချင်ပါတယ်
Digital ကိုယ်တိုင်ရိုက်ဆိုတော်ရောပေါ့နော်။ဘာလို့ ၁နှစ်အတွင်းလို့ စည်းကမ်းသတ်မှာလဲ။
(အမှန်တော့ မရိုက်အားလို့ ရှေးရှေးက ပုံဟောင်းတင်ချင်လို့ပါ)
ဝေဖန်တဲ့အချိန် ရိုက်သူ နာမည်ဖော်ပြတာက ပိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
pro ကြီးများကိုကြောက်လို ့မပြိုင်တော့ပါ…..
ဟုတ်ကဲ့ အစပျိူးပေး တဲ့ အတွက်
ရောင်းရင်း ကိုရင်တို့ရေ…. ကျနော်လည်း ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဝင်ပြိုင်ချင်ပါတယ်။
မြန်မာသင်္ဘောသီးတွေ ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာ တိုင်းတပါးသားတွေနဲ့ အပြိုင်
အားမာန်အပြည့်နဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ပုံတွေ ပို့ချင်ပါတယ်။
ဖုန်းနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျနော်က ကင်မရာဆို ဖုန်းမှာပါတဲ့
ကင်မရာလောက်ပဲသိတာမို့ ပြိုင်ပွဲစည်းကမ်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကင်မရာဖြစ်ဖို့ရယ်
ဈေးလည်း သက်သာမယ့် ကင်မရာအမျိုးအစားသိရင် Details အတိအကျလေး ပြောပြစေချင်ပါတယ်
ကျနော် ကမ်းကပ်ရင် ဝယ်ချင်လို့ပါခင်ဗျာ… ဆုမလိုချင်ပါဘူး…
သင်္ဘောသီးတွေ လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ အားမာန်ပြချင်လို့ပါ… :cool: :cool: